Izingxenye Zokushaya Zensimbi
Metal Wokushaya Tooling
Ukwenziwa kwamathuluzi nokugxivizwa komkhiqizo
Siyinkampani yokwenza amathuluzi nomkhiqizo. Le nkampani yehlukaniswe yiminyango emikhulu eyisithupha: ukwakhiwa, ukucubungula, ukuhlangana, ukugxivizwa nokuqinisekiswa kwekhwalithi. Kusukela ekuxhumaneni namakhasimende kuphrojekthi ye-oda ekudlulisweni kwamathuluzi, isixhumanisi ngasinye sokuthunyelwa komkhiqizo sixhunyaniswe eduze ....Funda kabanzi »
Silungisa futhi sithumele izingxenye ezisele zamathuluzi enziwe yi-MAGNA. Sivivinye ukuma kwembobo ngayinye yomsebenzi ngamunye.Funda kabanzi »
Thumela eMexico. Okokusebenza komkhiqizo waleli thuluzi yi-aluminium enobukhulu obungu-1.0mm. Isimo somkhiqizo siyinkimbinkimbi, futhi izidingo zokubekezelelana kosayizi zingaphezulu. Ngenxa yomgodi omkhulu enkabeni yomkhiqizo, ububanzi besixhumanisi sangaphambi kokuphela komkhiqizo sincane, umkhiqizo we-reboun ...Funda kabanzi »
Senze amathuluzi amaningi okubopha izinyawo zezimoto eGerman, Mexico naseSpain. Sifingqe ingcebo yolwazi lobuchwepheshe emapheshaneni wamathuluzi nasekwakhiweni kwamathuluzi nokulungisa iphutha laleli thuluzi lomkhiqizo. Kusukela kusethi yokuqala yamasampuli, isikhathi amasonto ayi-12. Kufinyelelwe kumaviki angu-8-10 manje, futhi ...Funda kabanzi »
Imoto ithuluzi eliqhubekayo
Kungokokuqala ngqa ukwenza ithuluzi lekhasimende laseJalimane, futhi laziwa yikhasimende. Ikhasimende liyaneliseka ngekhwalithi yethu nomoya wokubambisana. Sisebenzise amaviki ama-2 ukuklama isikhunta, amasonto ama-3 ukucubungula, ama-4 ukuhlangana nokulungisa iphutha, neviki elilodwa ukuqeda. Ngiyabonga ngokuthembela kwakho ...Funda kabanzi »
Ithuluzi eliqhubekayo lezimoto, Ucezu lwethuluzi le-GESTAMP lwathunyelwa eSpain, ubukhulu bokubonakalayo kwakungu-3.0mm, okokusebenza kwakunguJSH599R. Ithuluzi lenze iziteshi eziyi-16, usayizi wethuluzi ubungu-3350mm * 750mm, i-punch tonnage ibiyi-1000T, kanti isisindo sesikhunta besingu-4.3T. Ithuluzi lanamuhla lokuqala zama, usayizi wokuhlola 8 ...Funda kabanzi »
Imikhiqizo yekhava yangemuva yemoto
Lokhu kungumkhiqizo wethuluzi oqhubekayo wekhava yangemuva yezimoto. Ikhasimende lalo mkhiqizo lidinga ukuthi i-bayonet yombuthano wangaphakathi iyitape ekhanyayo egcwele ngosayizi owodwa wokusika ongu-14.8mm. Sine-burrs, i-deformation namabhande wezinyembezi ku-bayonet yombuthano wangaphakathi ngesikhathi sokulingwa kokuqala kwesikhunta. Ngemuva kwesikweletu ...Funda kabanzi »
Ukuskena kwengalo eluhlaza okwesibhakabhaka
Senza ukukhanya kwedatha okuluhlaza okwesibhakabhaka kokwakha, ukubumba, nezingxenye zommese, futhi sinikeze amakhasimende ngemibiko yokuhlola ye-3D. Ikhwalithi nokunemba kwethuluzi kuthuthukiswe kakhulu.Funda kabanzi »
I-AT = 8.0 impahla yensimbi engenasici ithunyelwe e-United States, isibhakela u-5.3mm ngaphakathi, isicelo sebhande elikhanyayo, sisebenzise i-16mm ubukhulu T isibhakela, 5.3mm ingxenye yobude 7.5mm ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende, manje ama-50,000 ngenyanga Izingcezu zikhiqiza amakhasimende . Senze ...Funda kabanzi »
T = 0.9 yemikhiqizo ye-aluminium. Ikhasimende licele isiqeshana esiphakathi. Umucu wawungazinzile lapho siqala ukuzama ithuluzi. Indlela yokwengeza umucu obanzi wezinto ukufeza ukwaneliseka kwekhasimende itholakele. Manje amathuluzi aseqalile ukusampula nokulingwa ...Funda kabanzi »
Imikhiqizo yokukhiya ulimi
uvala imikhiqizo yolimi ethunyelwa e-United States ibilokhu iqhubeke ikhiqiza izingcezu ezingama-300,000 zamakhasimende, futhi isikhunta samanje nemikhiqizo kulethwa kumakhasimende ukuze akhiqizwe. Sichithe amasonto ama-5 sakha amathuluzi, amaviki ama-2 ukulungisa iphutha, neviki eli-1 lokukhiqiza ...Funda kabanzi »
imikhiqizo yokubamba imithwalo yehadiwe nemikhiqizo yasendlini
Lesi isihlangu sethuluzi lezinto zemishini yokubamba impahla yehardware nezinto zikagesi zasekhaya. Imikhiqizo ijojowe e-United States. Ngesikhathi sokukhiqizwa kwesikhunta, sisebenzise amabhuleki wokumboza we-TICN ekwakheni izingxenye nezikebhe zokuqinisa ukumelana nokugqoka ngesikhathi sokukhiqiza. Ikhomishini ...Funda kabanzi »
Siyinkampani yokwenza amathuluzi nomkhiqizo. Le nkampani yehlukaniswe yiminyango emikhulu eyisithupha: ukwakhiwa, ukucubungula, ukuhlangana, ukugxivizwa nokuqinisekiswa kwekhwalithi. Kusukela ekuxhumaneni namakhasimende ku-oda p ...